USA: Qadar iyo UAE oo iibsanaya hub lagu qiyaasay $467 Malyuun oo Dollar – Kasmo Newspaper
USA: Qadar iyo UAE oo iibsanaya hub lagu qiyaasay $467 Malyuun oo Dollar
Updated - March 11, 2018 6:36 pm GMT
London (Kasmo), Waaxda Gaashaandhigga Maraykanka (Pentagon) ayaa daboolka ka qaadday in Waaxda ( State Department) ee Arrimaha Dibaddu ku qiyaasayso, faa’iidada hubka la oggolaaday in laga iibiyo UAE iyo Qadar, guud ahaan $ 467 Malyuun oo Dollar.
Warkaan oo laga sii daayay Pentagon-ka maalintii Khamiista, 8dii March waxaa lagu xaqiijiyay in ‘Raytheon Co’ noqonayso Shirkadda loo xil saaray in ay hubka ka iibiso 2daas dal ee Carbeed.
Pentagon waxaa kale oo laga sheegay in Ciidanka Cirka Qadar ‘ Qatar Emiri Air Force’ qorshaysatay in ay ka soo iibsato Washington qalab Militari oo qiimihiisu gaarayo $ 197 Malyuun oo Dollar. Qadar waxaa kale oo ay ku tala jirtaa, si loo casriyeeyo xarumaha hawlgalinta hawada, in ay soo iibsato qalab ay ka mid yihiin hannaanka Satellite-ka ‘GPS’ iyo baahinta macluumaadka xogta ‘Data’.
Dhanka UAE, Pentagon wuxuu daaha ka qaaday in la ansixiyay kunturaad dalkaasi ku soo iibsanayo 300 oo Gantaal oo ay ku jiraan ‘Sidewinder’, gantaallada la hoggaamiyo ee tababarka, kuawa riddada dheer (Tactical Missiles) iyo qalab dayactir.
Qiyaasta qiimaha guud ee qalabkaasi ugu kici doono Imaraadka waxaa lagu sheegay in ay gaarayso $ 270.4 Malyuun oo Dollar.
Qadar waxaa kale oo 10kii Disember 2017 ay saxiixday heshiis baaxaddiisa lagu qiyaasay $ 8 Bilyan oo Dollar oo Britain looga soo iibsanayo 24 diyaaradaha dagaalka oo noocoodu yahay ‘Typhoon Fighters’.
Heshiiska is-afgaradka waxaa bishii September ku kala saxiixday Dooxa, Wasiirkii Gaashaandhigga Britain, Gavin Williamson iyo dhiggiisa Qadar, Khalid bin-Maxammed Al-Catiyah, taas oo Britain ugu fadhida macne weyn xilli ay ku jirto geedisocodkii ‘Brexit’ ee ay uga bixi lahayd Midowga Yurub
War laga soo saaray Gaashaandhigga Qadar waxaa kale noo lagu caddeeyay in Wasiirrada 2da dal saxiixeen heshiis kale oo lagu abuurayo raxan dagaal oo Ciidanka Cirka 2da dal wadaagaan.
Ujeeddaduna wxay tahay sidii loo sugi lahaa nabadgalyada inta uu socdo tartanka kubbadda Cagta Adduunka ee sannadka 2022k oo lagu qaban doono dalka Qadar.